Animation sii jecel yahay sida dhexdhexaad ah, si ballaaran loo isticmaalaa madadaalo iyo dhiirrigelin video labadaba waxaa racfaan iyo ka mid ahaanshaha dadka da'da ah oo dhan. Sida oo kale, baahida loo qabo in la animation ka dib markii Raadka u korayo, sidaas darteed halkan waxaan ku eegi doonaa sida dhinacyada aasaasiga ah waxaa lagu gaari karaa.
2. Keenista faylka
Keenista file qof la mid ah sida oo kale oo kasta oo, aad si fudud u soo jiidi kartaa file u gal guddi mashruuca si ay u bilaabaan wadahadalka dejinta faylka. Waxaa muhiim ah in ay doortaan qaab sax ah halkan si loo hubiyo in lakabyada kala duwan ceshan yihiin si aad u nooleyn karo.
In 'Duuban' wadahadal dejinteeda inta badan waa nooca default dejinteeda, iyo waa in la beddeli karin si Curiska - Haysashada size lakabka, sida xajiya layers iyo waqti isku mid ah ku hayaa sanduuq kasta boodboodaya lakabka in tirada element laftiisa.
Double-gujinaya kooban hadda laga keeno ee aad qof dejiya oo mashruuca idiin, haatan waa inaan si loo hubiyo in ay tahay oo dhan xajmiga saxda ah ee looga baahan yahay in aad.
Haddaba, haddii aad rabto in aad qof wax yar ka weyn ama ka yar, waxaad ka fili lahayd in kaliya ay doortaan dhamaan lakabyada iyo qabsato baaxadda dhammaantood isku mar, si kastaba ha ahaatee lakab lala sidan oo kale, waxa ay leedahay saamaynta jiidaya layers ah marka laga reebo sida ay u Khushuucsan ama is dul saaran sidii ay u koraan, si aad u baahan tahay si ay u abuuraan shay cusub anshax ka Layers> New> UJEEDDO anshax la , oo markaas waalidka oo dhan lakab kale, waxa uu. Taas waxaad ku samayn doorataa dhamaan lakabyada iyo jiidayeen badhanka waalidnimada in shayga waxba.
Tani waa habka ugu fiican ee qaadeysaa wax wax multilayered oo waa u faa'iido badan oo ka baxsan mashruuca animation la halkan wada hadleen.
Marka aad qabsato qof oo wax walba sida aad u rabto in, aan u soo guurto karaa in ay waxyaabaha aasaasiga u ah dhiirogelin dabeecadaada.
4. Aasaaska Animation
Ka dib markii la qabsado xallinta iyo qof ku haboon Waxaan leeyahay soo socda sida screen shaqada.
Si aad wax fudud, waxaan u tegayaa inaan xaddido aan animation in labo ka mid ah addimada, waxaan noqon doonaa iyadoo la isticmaalayo isku-dar ah ka dib Saamaynta ayaa puppet Tool iyo Waalidnimada si taas loo gaaro, sidaa shaqada ugu horeysa waa aalad puppet laftiisa.
Waxaad ka heli this on birta ku menu sare, iyo qalabkan waxa loo qorsheeyay in ay ku riday pin ah ee lakabka ah meesha aad rabto waxaa si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa.
Sidee baad u isticmaali waa in ay doortaan lakabka aad rabto, dooro qalab puppet ah, oo wuxuu ku shubay pin meelo wixii qodobbada muhiimka ah ee aad rabto in aad si ay ula socdaan, waa dhibcood ka dib Raadka isticmaalo si uu u fasiro dhaqdhaqaaqa u dhaxeeya keyframes.
Halkan waxaan biinanka gelinayn meelo istiraatiiji ah agagaarka dabeecadda, aad si fudud u riix meesha aad rabto inaad ku riday pin la qalab puppet firfircoon ka.
Marka taasi la sameeyo ee aad ka dibna bilaabi karaan in nooleyn oo cad cad.
Taas waxa loo sameeyaa xulashada lakabka ama shay oo aad rabto inaad u guurto, iyo maraan guddi waqtiga si aad u hesho in ay saamayn ku, iyo ugu dambayntii in la abuuro dhaqdhaqaaqa ee goobta ugu horeysay ee la soo dhaafay.
5. dhiirogelin lugaha
Si aad u hesho animation aan ka shaqeeya, sida inta badan ka dib mashaariic saamaynta, ay isticmaalaan fikradda keyframe ah. Halkan waxaan ku tagaan si ay guddi waqtiga dooro lakabka gaar ah waxaan ka shaqeyneynaa, halkan waa lugta bidix. Waxaan ballaariyo sifooyinka ah ee lakabka, iyo maraan puppet> mesh> Deform si aad u hesho si musmaarradiisa oo aynu hore kaalinta. Shift dooro musmaarradiisa oo dhan ee lakabka, haddii ay taasi waxaa jiray 3, wuuna qotomiyey keyframe ugu horeysay. Markaasuu wakhtiga dhinac socdaan a loox yar, qabsato lugta, dhigay keyframe soo socda. Waxaan jeclahay in aan ujeedadoodu tahay 5 keyframes ee isku xigxiga oo dhamaystiran oo dhaqdhaqaaqa, iyo waxaan ka dibna la qabsan karaa oo bleach keyframes kuwa ay ku soo celiyaan xigxiga haddii loo baahdo, waayo, waxyaalaha sida socodka, waxa ay kor u dadajiyaa socodka hawsha oo idil.
Kuwani waxay hagaajin lagu celiyo shan loox kasta ilaa aan lugta hore dhaceen dhaqdhaqaaqa dhamaystiran leeyihiin. Ka dibna waxaan si fudud nuqul oo dhejiyo keyframes kuwa 3 jeer hoos waqtiga si ay u abuuraan isku xigxiga afar talaabo ah.
Tallaabada xigta waa in ay tani ku soo celiyaan lugta kale. Iyada oo ay taasi mid aad leedahay Hanuuniye sababtoo ah sida aad u horumarin markii Kursor aad animation hore ku tusi doonaa, si aad u dhigma karaa dhaqdhaqaaqa labaad ee this.
Halkan waxaan ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa si loo jilo yar qoob ka ciyaarka ah, oo idinka mid ah dabcan, hadda dhaqaajin karin iyo dar dhaq madaxa, jirka iyo gacanta ay u la socdaan, laakiin xog halkan waxaan uun samayn doonaa lugaha.
6. Ku darista dhaqdhaqaaqa
Marka aan leenahay isku xigxiga la animation ah waxaan dooneynaa, tallaabada xigta waa in lagu daro qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqa dhabta ah goobta. Sida ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan waa in ay ka hor-ka koobanahay isku xigxiga oo dhan idin abuuray oo keliya.
Dooro dhamaan lakabyada iyo dooro Pre Comp ka Layers> Pre Comp, taasi waxay abuuraysaa isku xigxiga animation aad ee ka kooban hal in aynu markaas bedelno oo aan saameyn xabbadood naga dhaceen.
Sida abid, dhaqdhaqaaqa bilaabataa abuuro keyframe ah bilowga waqtiga loogu talagalay booska uu ka comp ka hor ah.
Haddii aad samaynayso animation socodka ah meel aad ku bilaabatay laga yaabaa shaashadda si ay u kiciyaan dhaqdhaqaaqa gal shaashadda iyo off dhinaca kale, In yar tusaalahan waxaan doonayaa in aan jilo ee kor iyo hoos dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka ah.
Markaasaa waxaa u fudud yahay arrin keyframes dheeraad ah iyo resetting booska mar kasta.
Tani hubaashii waa dhaqdhaqaaq aad u aasaasi ah oo yar cagta ah looga faa'idaysan barwaaqoobi doonaa dhamaadka, laakiin maamulaha dhiirogelin characters aad isku wax kasta oo ay tahay in aad qabanayso. Muhiimka ah waa in ay Nidaamsanaan goob dhaqdhaqaaqa, markii aad leedahay mid ka mid Addinka beddelo, waxaad isticmaali kartaa in isagoo ah hanuuniye nasashada iyo shaqeeyaan iyada oo mid kasta ilaa la gooyo waa dhameystiran ee dhammaan qaybaha dabeecada. Sidoo kale xasuuso in aad dib u tagi kartaa keyframe kasta qayb ka mid ah dabeecadda iyo beddelaad samaysid ilaa aad ku faraxsan yahay natiijada ay yihiin. Haddii aad ku cusub tahay animation noqon kartaa qayb ka ah geedi socodka maxkamad iyo qalad ah, laakiin adkaysasho oo dhan waa in loo baahan yahay. Waxa kale oo run ahaantii waa lagama maarmaan in la sameeyo isticmaalka wanaagsan ee xarunta nuqul iyo koollada si ay u soo saari aad socod, cayaar ama dhaqdhaqaaq kasta oo inaan wax badbaadiyo u xaddi badan ee waqtiga ee geedi socodka.
> Resource > Video > Sida loo sameeyo Animation Character in dib markii Raadka